I-Samsung Gear S2 ihlaziywa ngezinye zeempawu zeGear S3 | Iindaba zeGajethi
Kubonakala ngathi abafana eSamsung bafuna ukwenza izinto ngokuchanekileyo kwaye abaqali ukuyeka ukuxhasa izixhobo ezindala, ubuncinci ezo zilawulwa yinkqubo yazo yokusebenza. Ekupheleni kukaNovemba sikwazisa ngokusungulwa ngokusesikweni eSpain UDisemba wokugqibela we-Samsung Gear S1 entshaIsiphelo esitshayisa imarike ngemisebenzi emitsha kunye neempawu zokutshintsha umntakwabo omncinci, iGear S2. Namhlanje inkampani yaseKorea isungule uhlaziyo olutsha lwe-S2 apho bongeze eminye yemisebenzi ebandakanywe ngokwendalo kwimodeli esandula ukubakho emarikeni.
Enye yezona zinto zibalaseleyo kukukwazi ukukhetha amanqanaba afumaneke kuphela kwi-S3, into enokubulela kubo bonke abo basebenzisi abangaphezulu kokudinwa kwesiqhelo. Isithsaba esijikelezayo, Olunye lweempawu ezibambe kakhulu le modeli, kwaye esinokuhamba kuzo ngeendlela ezahlukeneyo zesiphelo sendlela, ngoku iyasivumela ukuba siphendule iminxeba, sicime ialam ... ngokuxhomekeke apho sijika khona.
Ukongeza, olu hlaziyo lukwabonelela ngenkxaso yokubhala ngesandla, nangona kufanelekile ukuba singalibala malunga neSpanish kuba iSamsung okwangoku iyayivumela ngesiNgesi, isiKorea kunye nesiTshayina. Umsebenzi we-S-Voice ivuselelwe kwakhona ukuvumela ukwenza iinkqubo ngemiyalelo yelizwi, into eyaphoswa ebusweni besi siginali.
Impilo ye-S, isicelo esenzelwe ukulinganisa ukusebenza komzimba, ngoku siyakwazi ibhaqe ngokuzenzekelayo uhlobo lomthambo esiwenzayo, Into eye yenziwa ukuba ifashoni kwimilinganiselo yamasongo kwaye ivumela umsebenzisi ukuba angachithi ixesha ekhangela umsebenzi aza kuwenza ngalo mzuzu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » SmartWatch » I-Samsung Gear S2 ihlaziywa ngezinye zeempawu zeGear S3
Uyilo lweNqaku 7 kwakhona ekukhanyeni kweengxaki zalo